Tigidhada Tareenka OBB ee Jaban iyo Qiimaha Safarka | Save A tareenka
Tigidhada Tareenka OBB ee Jaban iyo Qiimaha Safarka
Guriga > Tigidhada Tareenka OBB ee Jaban iyo Qiimaha Safarka
Halkan waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka ku saabsan Tigidhada tareenka OBB ee jaban iyo Qiimaha safarka ee OBB iyo faa iidooyinka.
mawduucyada: 1. OBB by Fariimaha Tareenka
2. Ku saabsan OBB 3. Indheergaradka Si Aad U Hesho Tigidhada Tareenka OBB ee Jaban
4. Waa imisa qiimaha tikidhada OBB 5. Jidadka Safarka: Maxay ugu fiicantahay qaadashada tareenada OBB, oo aan lagu raacin diyaaradda
6. Maxay ku kala duwan yihiin Heerarka, Raaxo, iyo Sparschiene dhanka OBB 7. Ma jiraa rukhsad OBB ah
8. Muddo intee le'eg kahor bixista OBB inay timaado 9. Waa maxay jadwalka tareenka OBB
10. Saldhigyadee ayaa u shaqeeya OBB 11. OBB FAQ
OBB by Fariimaha Tareenka
Iyada oo leh saacad aad u sareysa 96%, OBB (mararka qaarkood waxaa loo yaqaan OEBB) waa mid kamid ah wadooyinka tareenka ee loogu kalsoonaan karo Yurub.
Sanadkasta, OBB qaadataa 447 milyan oo qof iyo 105 malyuun tan oo badeecooyin ah oo ku sii jeedda meelaha ay ka socdaan gudaha Austria iyo Yurub oo dhan.
OBB waa jawi saaxiibtinimo leh, iyo 100% dhammaan korantadooda waxay ka soo baxaan tamarta dib loo cusbooneysiin karo.
OBB waa bixiyaha adeegga dhaqdhaqaaqa ugu weyn ee Austria.
Ku saabsan OBB
OBB, Wadooyinka Tareenka ee Austrian, waa magac kale oo loogu talagalay Wadooyinka Tareenka ee Austrian. Tan iyo markii la aasaasay gudaha 1923, OBB waxay u fidisay adeegyo dhaq dhaqaaq muwaadininta Australiyaanka sanado hadda. Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa muujisay in Yurub, OBB waa tan ugu wanaagsan xilliyada, isku halaynta, iyo inta jeer.
OBB waxay bixisaa adeegyada tareenka ee gudaha Austria iyo guud ahaan Yurub. Iyada oo leh tigidh sax ah, waxaad booqan kartaa dhammaan kuwa ugu fiican meelaha fasaxa ee Yurub. Iyada oo leh noocyo kala duwan oo tigidhada ah iyo kaararka rukhsaynta, OBB waxay kahadashaa baahiyaha qof walba.
Tareenka OBB wuxuu si isdaba joog ah ugu socdaa Vienna – daaq, Salzburg – Vienna, Linz – St. La codeeyay, Graz - Salzburg. Waxaad sidoo kale ku tegi kartaa waddamada deriska ah ee Yurub gudaheeda adoo adeegsanaya tareenka OBB.
Guud ahaan shirkadda, 41,904 shaqaalaha ka shaqeeya tareenka iyo shabakadaha baska (lagu daray 2,000 tababbarayaasha) hubi in qaar 1.3 Malaayiin rakaab ah ayaa maalin walba si nabad ah ku gaaraa meerahooda.
Tag Kaydi Bogaga Tareenka ama u isticmaal aaladdaa 'widget' si aad u raadiso waxay tababartaa tikidhada OBB
– Badbaadi Aaladda Tareenka iPhone
– Badbaadi Tareenka Android App
Meesha loo socdo
Taariikhda Soo Noqoshada (Ikhtiyaari)
Dadka Waaweyn (26-59):
Indheergaradka Si Aad U Hesho Tigidhada Tareenka OBB ee Jaban
Tirada 1: Ballanso tikidhadaada OBB kahor intii aad karto
Qiimaha Tigidhada tareenka OBB wuu kacayaa markay maalinta safarku soo dhowaanayso. Waxaad badbaadin kartaa lacag adoo ballansanaya tikidhadaada tareenka OBB illaa iyo inta suuragalka ah maalinta bixitaanka. Tigidhada tareenka OBB ayaa la heli karaa sida ugu dhaqsaha badan 3 si ay u 6 bilood ka hor bixitaanka tareenka. Booqashada hore waxay xaqiijineysaa inaad hesho tikidhada tareenka OBB ugu raqiisan. Iyaguna tiro ahaan way xadidan yihiin, si dhakhso leh oo aad wax u qorto, ka jaban adiga. Si lacag loogu keydiyo tikidhada tareenka OBB, tikidhada hore u iibso.
Tirada 2: Ku safro OBB inta lagu jiro xilliyada ugu sarreeya
Tigidhada tareenka OBB waa ka raqiisan inta lagu jiro xilliyada ugu sarreeya, bilowga toddobaadka, iyo maalintii. Waad iska hubsan kartaa inaad heleyso tigidhada tareenka ka jaban toddobaad gudihiis. Talaadada, Arbacada, iyo Khamiista, Tigidhada tareenka OBB ayaa ah kuwa ugu dhaqaala badan. Sababta oo ah mugga socdaalayaasha ganacsiga ee shaqada tagaya subaxa iyo fiidka, tikidhada tareenka ayaa ka qaalisan. Way ka jaban tahay inaad safarto waqti kasta inta u dhaxaysa safarka subaxdii iyo fiidkii. Usbuuc-dhamaadka waa waqti kale oo ugu sarreeya oo loogu talagalay tareennada, gaar ahaan maalmaha Jimcaha iyo Sabtida. Qiimaha tigidhada tareenka ee OBB sidoo kale way kordhayaan ciidaha dadweynaha iyo ciidaha iskuulka.
Tirada 3: U dalbo tikidhadaada OBB marka aad hubto jadwalka safarkaaga
Tareennada OBB ayaa baahi weyn loo qabaa, iyo tartan yar, hadda waxay wali yihiin xulashada ugu sareysa ee tareenada Austria. Waxay awoodaan inay dejiyaan xaddidaadda tigidhada tareenka sida tii oo kale oo mamnuucaya is-weydaarsiga tigidhada ama soo-celinta ilaa ay tahay nooca tikidhada Ganacsiga.. In kasta oo ay weli jiraan degello internet oo aad tikidhadaada gacan labaad dadka uga iibin karto, OBB ma oggola in tikidhada gacan labaad la iibiyo. Sidee tani u caawineysaa inaad lacag dhigato? Dalbo tigidhkaaga keliya markaad hubto jadwalkaaga inuu kaa badbaadin doono inaad hal tikit laba jeer dhigto maxaa yeelay wax baa soo baxay oo ma isticmaali kartid tigidhka asalka ahaa..
Tirada 4: Iibso tikidhadaada OBB tareenka Save
Badbaadinta Tareenka ayaa leh kan ugu weyn, ugu fiican, iyo heshiisyada ugu jaban tikidhada tareenka ee Yurub. Xiriirka aan la leenahay wadayaasha badan ee tareenka, ilaha tikidhada tareenka, iyo aqoonteenna ku saabsan algorithms-ka tikniyoolajiyadda waxay na siisaa marin u hel heshiisyada tikidhada tareenka ee ugu jaban. Kaliya uma bixinayno qandaraasyo tikidhada tareenka rakhiis ah oo loogu talagalay OBB kaligiis; waxaan bixinaa isku mid kuwo kale oo loogu badali karo OBB.
Tikidhada Salzburg ilaa Vienna
Tigidhada Munich illaa Vienna
Tikidhada Graz ilaa Vienna
Tigidhada Tigidhada Vienna
Waa imisa qiimaha tikidhada OBB?
Tikidhada OBB waxay ka bilowdaan € 1,5 illaa ugu sarreysa illaa € 51 safarka keliya ee tareenka. The qiimaha tikidka tareenka OBB Waxay kuxirantahay nooca tigidhada aad iibsato iyo goorta aad dooratid inaad safarto:
Tigidhada hal-door ah Safarka wareega
Jaangooyo € 1,50 – € 51 € 2,40 – € 100
Fasalka Koowaad € 1,50 – € 51 € 2,40 – € 100
Jidadka Safarka: Maxay ugu fiican tahay in la qaato tareenka OBB, oo aan lagu raacin diyaaradda
1) Waxaad tagtaa Xarunta Magaalada. Tani waa hal faa'iido oo tareenka OBB marka la barbar dhigo diyaaradaha. Tareennada OBB iyo dhammaan tareennada kale waxay ka safraan meel kasta oo magaalada ah oo ay u sii jeedaan bartamaha magaalada ku xigta. Waxay ku badbaadineysaa waqti iyo qiimaha kabista garoonka diyaaradaha illaa bartamaha magaalada. Iyadoo joogsiga tareenka, way fududaan tahay inaad tagtid meel kasta oo magaalada aad u socoto. Macno malahan halkaad ka timid, Munich, Salzburg, Linz, ama Cologne, joogsiga bartamaha magaalada waa faa'iido weyn oo tareenka OBB ah!
2) Ku safridda diyaaradaha waxay u baahan tahay inaad joogtid garoonka diyaaradaha ugu yaraan dhowr saacadood kahor waqtiga duulistaada. Waa inaad maraysaa hubinta amniga kahor intaan laguu oggolaanin inaad fuusho diyaaradda. Iyada oo leh tareennada OBB, kaliya waa inaad joogtaa xarunta wax ka yar saacad kahor. Markaad tixgeliso waqtiga ay kugu qaadanayso inaad ka raacdo garoonka diyaaradaha illaa bartamaha magaalada, Waad garan doontaa in tareenka OBB uu ku fiican yahay marka loo eego wadarta wakhtiga safarka.
3) Dusha sare, Qiimaha tikidhada tareenka OBB ayaa umuuqda inay ka qaalisan yihiin tigidhada hawada. Si kastaba ha ahaatee, markaad isbarbar dhigto dhamaan dacwadaha ku lugta leh, Tigidhada tareenka OBB waxay leeyihiin qiimo ka wanaagsan kan. Iyada oo ay kujirto kharashyo kale sida ajuurada boorsooyinka ee aadan aheeyn inaad ku bixiso tareenka, safarka OBB ayaa ugu fiican.
4) Tareenadu waa jawi saaxiibtinimo. Isbarbar dhig ku dhexmara tareennada iyo diyaaradaha, tareenadu kor ayey u soo baxayaan. Diyaaradaha ayaa si ba'an u wasakheynaya jawiga iyagoo wata heerar sare oo kaarboon ah oo ay bixiyaan. Tareenka isbarbar dhiga Kaarboon 20X kayar ka badan diyaaradaha.
Munich ilaa tigidhada Innsbruck
Salzburg illaa tikidhada Innsbruck
Oberstdorf tikidhada Innsbruck
Graz ilaa tikidhada Innsbruck
Maxay ku kala duwan yihiin Heerarka, Raaxo, iyo Sparschiene dhanka OBB?
OBB waxay leedahay noocyo tigidhada tigidhada miisaaniyado kaladuwan iyo noocyada safrayaasha: ha ahaato ganacsi ama madadaalo. Waad iska hubsan kartaa in mid ka mid ah tigidhadan ay kugu habboonaan doonaan.
Tigidhada Caadiga ah ee OBB:
Tigidhada caadiga ahi waa tigidhada tareenka ugu dabacsan ee ay OBB bixiso. Haddii ay tahay inaad ku safarto ogeysiis gaaban, waa inaad heshaa tigidhadan. Kuma koobna oo keliya tareen gaar ah, waxaana laguu oggol yahay inaad doorato xiriirintaada. Tigidhada caadiga ah ee OBB waa mid ansax ah 2 maalmood ayadoon loo eegayn wadada iyo kan iibsiga. Tigidhada caadiga ah waxaa lagu soo celin karaa lacag la’aan maalin ka hor maalinta ugu horeysa ee ansaxnimada. Markaad tikidhada ka iibsaneyso internetka, waxaa jira tilmaamo gaar ah oo ku saabsan magdhowga iyo ansaxnimada.
OBB Tigidhada raaxada:
Tigidhada OBB Komfort waa tikidhada OBB ee caadiga ah, waana lasiiyaa isku xirka tareenka habeenkii. Tikidka OBB Komfort wuxuu daboolayaa kharashka safarka, Boos celinta nooca safarka ee la xushay, iyo quraac qolka hurdada.
Si ka duwan tigidhada caadiga ah, tigidhada Komfort ma ahan mid dabacsan dabcan. Waxaa loo ballansan yahay wado qaas ah iyo tareen gaar ah. Waxaad u baahan doontaa inaad hesho tigidh cusub wixii xidhiidh ah ka hor iyo ka dib marinka uu tigidhkani daboolayo.
Lacag celin, Tigidhada Komfort ee OBB waxaa lagu soo celiyaa lacag la'aan ilaa 15 maalmood ilaa maalinta ugu horeysa ee ansaxnimada. Kadib 15 maalinta calaamadda, Tigidhada Komfort ayaa lagu soo celiyaa at 50% qiimaha asalka ah.
Tigidhada OBB Sparschiene:
Caawinta ka tigidhada caadiga ah iyo tigidhada Komfort, OBB waxay bixisaa tigidhada kale duwan oo loo yaqaan tigidhada Sparschiene. Xaddigaani waa mid rakhiis ah oo loogu talagalay socotada miisaaniyadda. Waxaa jira laba nooc oo tigidhada Sparschiene ah.
Ma jiraa rukhsad OBB ah?
Loogu tala galay muwaadiniinta deegaanka, waxaa jira laba nooc oo rukumasho ah, kaararka loo yaqaan 'Vorteilscard' iyo Osterreichcard. Wixii caalami ah waxaan kuu soo jeedineynaa inaad waqti hore iibsato ka dibna waxaa laguu soo bandhigi doonaa xulashada ugu jaban.
Vorteilscard Classic waxaa laga iibsan karaa at: (Muwaadiniinta maxalliga ahi waxay helaan a 45% qiimo dhimis tikidhada caadiga ah ee rakaabka ee tikidhadooda ka soo iibsada)
– Xisaabta tigidhada OBB.
– Adeegga macaamiisha OBB 05-1717
– Ka socota shaqaalaha tareenka OBB iyo basaska.
Iyada oo wata Osterreichcard Classic, waxaad heli doontaa qiimo dhimis dheeraad ah oo is-ballan ah 5% on tigidh hal caadi ah oo rakaab ah marka tikit laga iibsanayo:
– Qalabka iibinta tikidhada OBB ee rugta tareenka.
Rakaabka da'da ah 15 iyo wixii ka badan ayaa iibsan kara Vorteilscard Family. Kaarkani wuxuu shaqeynayaa marka lagu daro kaarka aqoonsiga sawir, oo ay kujirto da'da lahaanshaha. Iyada oo tikidhadan la wado, Waxaad ku safri kartaa dhammaan tareennada OBB.
Dhamaan kuwa haysta Vorteilscard Qoysku waxay ku raaxeystaan ​​dusha sare ee caanka Vorteilscard. Waxaa sii dheer dusha sare ee caadiga ah, laba haysta kaarka Vorteilscard Family sidoo kale waxay helayaan dhimis haddii ay si wada jir ah ula safraan ilmo ama cunug. 4 Caruurta haysta Haysta Vorteilscard waxay heli doonaan qiimo dhimis 100% on tigidh hal caadi ah.
Kaararka Dhalinyarada ee Austria
Ilaa maalinta ka horreysa dhalashadooda 26aad, Rakaabka ayaa iibsan kara Osterreichcard Jugend. Waxaad ku caddeyn kartaa da'daada aqoonsi sawir leh oo leh caddeyn da'da.
Dhammaan waalidiinta dhallaanka iyo carruurta ee qaata kaalmada qoyska ee Austria ama meel kaleba way soo iibsan karaan Osterreichcard Familie. Faa'iidooyinka ayaa la mid ah kan Osterreichcard classic.
Rakaabka ayaa iibsan kara Osterreichcard Classic. Iyada oo wata Osterreichcard Classic, waxay heli doonaan qiimo dhimis 100% kharashka boos celinta boosaska fasalka 1aad iyo 2aad. Iyada oo leh fasalka 2aad ee 'Osterreichcard Classic', aad hesho a 50% sicir-dhimis isbeddelka fasalka laga bilaabo fasalka 2-aad ilaa kan 1aad oo leh tikid caadi ah oo nooca caadiga ah ah.
Muwaadiniinta waayeelka ee Austaralia rakaabka da 'ahaan 63 iyo wixii ka badan ayaa iibsan kara Osterreichcard Senior. Faa'iidooyinka ayaa la mid ah kan Osterreichcard classic.
Kaarka Gaarka ah ee Austria
Dadka naafada ah ee leh qaybtan soo socota ee ku jirta shahaadooyinkeeda naafo ee Austrian ama naafonimada daran ee dagaalka la xiriira waxay iibsan karaan Osterreichcard Spezial. Faa'iidooyinka ayaa la mid ah kan Osterreichcard classic.
Tigidhada Saint Polten
Tigidhada Vienna ilaa Salzburg
Saint Polten ilaa Wiener Neustadt tigidhada
Tikidhada Salzburg ilaa Graz
Muddo intee le'eg kahor bixista OBB inay timaado?
Way adagtahay in si sax ah loogu dhaho kan labaad, laakiin Save Train wuxuu kugula talinayaa inaad timaadid saacad ka hor waqtiga bixitaankaaga. Hadaad ku dhameysato kontaroolka baasaboorka, waad ka adeegan kartaa waxyaabaha aad u baahan tahay si safarkaaga tareenka uga dhigo mid raaxo leh intii suurogal ah.
Waa maxay jadwalka tareenka OBB?
Waxaad ka heli kartaa waqtiga-dhabta ah boggayaga internetka bogga Badbaadada Tareenka. Kaliya ku qor meesha aad hadda ku sugan tahay iyo halkaad rabto, waanuna ku tusin karnaa macluumaadka.
Saldhigyadee ayaa u shaqeeya OBB?
Xarunta Vienna ee OBB waa Vienna Hauptbahnhof (Xarunta dhexe ee Vienna), kaas oo ku yaal meel u dhow Sudtiroler Platz oo ku taal bartamaha Vienna.
Magaalada Linz, Maalmahan tareenka OBB ka tag oo ka imaada Xarunta Dhexe ee Linz (Saldhigga dhexe ee Jarmalka wuxuu la mid yahay Hauptbahnhof), meel aan ka fogayn wabiga Danube.
Salzburg xarunta tareenka ugu weyn (Saldhigga Dhexe ee Salzburg) waxay ku taal badhtamaha magaalada 2aad ee ugu weyn Austria – Salzburg.
Baaskiil Ma Loo Oggol Yahay Gudiga Tareennada OBB?
Baaskiiladaha waa loo oggol yahay tareennada OBB illaa iyo inta aad tikidh uga iibsanaysid saldhigga. Waxay ku kacayaan € 2 baaskiil kasta.
Caruurtu Carruur la'aan ugu Safraan Tareenka OBB?
Haa, laakiin ilaa iyo xaddi cayiman. Caruurta ka yar lix sano jirka si bilaash ah ayey u safraan.
Ma Xayawaanaadka loo oggol yahay tareenka OBB?
Haa, waa ilaa inta ay raacayaan tilmaamaha xayawaanka. Xayawaannada yaryar waa in lagu qaadaa kiish ama kiis la mid ah.
Waa maxay nidaamka u degidda OBB??
Saldhigyada qaarkood waxay leeyihiin bandhigyo elektiroonig ah oo muujinaya samaynta tareennada. dheeraad ah, u isticmaal kuwan si aad u hubiso aagagga uu lambarka tababarku tareenka noqon doono marka uu tareen yimaado.
Badanaa la Isweydiiyo OBB FAQ – Miyay tahay inaan horay u dalbado kursi OBB??
Waxaad karaa boodaok a waan ogahayat ka hor gudaha OBB tareenada loogu talagalay 3 euro. Waxaad doono hel shaqsi kursi ka dib markii la sii qabsado.
Ma ku jiraa khadka internetka ee Wi-Fi gudaha gudaha OBB?
Haa. Waad ku raaxeysan kartaa Internetka bilaashka ah ee WiFi oo dhan tareenka OBB iyo dhammaan fasalada safarka markaad iibsaneyso tikidhada OBB (Gaar ahaan shabakada SaveATrain.com).
Hadaad akhrido ilaa hada, waad ogtahay waxa aad u baahan tahay oo dhan inaad ka ogaato tareenkaaga OBB waxaadna diyaar u tahay inaad iibsato tigidhkaaga tareenka OBB Save A tareenka
Waxaan leenahay Tigidhada Tareenka ee loogu talagalay hawl wadeenada tareenka:
Tareenada isku xidha
Deutsche Bahn ICE Jarmalka
Deutsche Bahn Jarmalka
Ma rabtaa inaad boggaan ku dhigto bartaada? Riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-obb%2F%0A%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah), Ama si toos ah ayaad ugu xidhiidhi kartaa boggan.
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml oo waad badali kartaa / de to / nl ama / fr iyo luqado badan.
Safarka Business by tareenka
Tilmaamaha Safarka Gawaarida
Tilmaamaha Safarka Eco
Tareenka Safarka ah ee Austria
Tareenka Safarka Belgium
Tareenka Safarka ee Britain
Tareenka Safarka Bulgaria
Tareen safarka Shiinaha
Tareen Travel Czech Republic
Tareenka Safarka Danmark
Tareenka Safarka ee Finland
Tareenka Safarka Faransiiska
Tareenka Safarka Jarmalka
Tareen safarka Giriigga
Tareen Travel Holland
Tareenka Safarka ee Hungary
Tareen Safarka Japan
Tareenka Safarka Luxembourg
Tareenka Safarka Noorway
Safarka tareenka Poland
Tareenka Safarka Boortaqiiska
Tareen safarka Ruushka
Tareenka Safarka Skotland
Tareenka Safarka Isbaanishka
Tareenka Safarka Iswidhan
Tareenka Safarka Switzerland
Tareen Travel The Netherlands
Tareenka Safarka Turkiga
Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska
Tareen Safarka USA
Talooyin ku Socda
Yoga ee Yurub